KDE Neon Pinebook remix Edition ikozvino inotsigira 64-bit ARM malaptop | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Jonathan Riddell Kuburikidza neshoko ndakagadzira iyo chiziviso chekuti KDE Neon inoshanda sisitimu yazvino inoenderana zvizere neARM 64-bit malaptop.
Kuve zvakanyatsojeka, kuburitswa kutsva kwakanangiswa paPinebook laptop., inova yakaderera mutengo uye yakareruka uremu komputa kubva kuPine64 kambani.
Kusiyana nemabhuku echinyakare, Laptop iyi inoshandisa 64GHz Quad Core Cortex A53 1,2bit CPUARM, pamwe ne2 GB RAM LPDDR3 uye Mali 400 MP2 processor processor.
Panzvimbo pe hard disk drive uchishandisa 16GB eMMC 5,0 flash memory, inowedzerwa kuenda ku64GB, iyo yekuchengetera kugona inogona kuwedzerwa uchishandisa microSD kadhi inosvika ku256GB.
Inotsigira Wi-Fi 802.11bgn uye Bluetooth 4.0, ine 2 USB 2.0 madoko, 1 mini HDMI doko uye headphone jack.
Iyo zvakare ine 2 vatauri. Kugadziriswa kweiyo TN LCD skrini ndeye 1366 x 768.
Kune avo vaverengi vasati vaziva KDE Neon Ini ndinogona kukuudza kuti uku ndiko kugoverwa kweLinux uye nesisitimu yekushandisa yakatorwa kubva kuUbuntu, asi yakanangana nekugadzira software yeiyo KDE yakavhurika sosi nharaunda.
Iko kusimbiswa kweinotevera-gen kunyorera mapakeji akadhonzerwa zvakananga kubva kuKDE isati yasunungurwa kuburitsa kunopa vanogadzira kutanga kuwana kune izvo zvitsva maficha, asi akazara nemabhugi mune software.
Pinebook inoenderana neLinux uye Android masisitimu anoshanda.
1 Nezve KDE Neon Pinebook remix Edition
2 Dhawunirodha KDe Neon Pinebook Remix Edition
Nezve KDE Neon Pinebook remix Edition
Azul Systems yakashanda padhuze nemugadziri wePinebook kugadzira mufananidzo wekuyedza unoshanda nemazvo pamidziyo iyi.
Chikwata chakashandura kuKDE Neon Linux kugovera uye chakagadzira bhaotable uye yakagadziriswa uye inogoneka mufananidzo unoshanda paPinebook.
Vagadziri vacho vakagadzirisawo mabhugi mazhinji, ese ari madiki uye makuru mukati meiyo software sitaki, kernel, madhiraivhi egrafiki, Qt, kurongedza, uye muKDE Zvimiro uye iyo KDE Plasma desktop nharaunda.
Mhedzisiro yacho inoratidza kuti KDE Plasma inokodzera musarudzo yemidziyo yerudzi urwu. Maitiro acho akaburitsa kwakakosha mashandiro ekuita muKDE Maumbirwo uye KDE Plasma.
Iyo KDE Neon Pinebook Remix OS ichiri pasi pekuvandudzwa sezvo zvimwe zvinhu zvichida kukwidziridzwa kuitira ruzivo rwekugadzirira-kushandisa, asi runoshandiswa mukushandisa kwemazuva ese.
Iyi ARM vhezheni yeKDE Neon kugovera inotsigirwa neazvino vhezheni vhezheni yekuparadzira iyo yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver).
Pasi pehodhi, KDE Neon Pinebook Remix inomhanya Linux kernel 3.10.105-BSP-1.2, uye yazvino KDE Plasma 5.13.4 desktop nharaunda uye iyo KDE 5.49.0 Sisitimu software package yakaunganidzwa neQt 5.11.1.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kunyangwe Ubuntu 18.04 LTS iine iyo kernel 4.1xxx, KDE Neon Pinebook Remix inoshandisa vhezheni yebazi re kernel 3.10.xxxx kubvira panguva iyo iyo Pinebook inogumira kumhanya iyi vhezheni ye tsanga.
Pari zvino Tinogona kuratidza kuti iyi vhezheni yeKDE Neon yePinebook ine zvinotevera:
KDE Neon (nemapakeji azvino anowanikwa muUbuntu bionic (18.04))
Iyo KDE Plasma 5.13.4 desktop nharaunda
KDE Mapurani 5.49.0
Dhawunirodha KDe Neon Pinebook Remix Edition
Finalmente Ivo vanofanirwa kuziva kuti kunyangwe iwo masisitimu emifananidzo akagadzirwa ari muchikamu chekusimudzira, saka kana iwe uchida kudhawunirodha iyi vhezheni vhezheni unofanirwa kuziva kuti zvingangoita kuti iwe uwane zvimwe zvikanganiso.
Payo pachayo haisi yeAlpha vhezheni yekutaura, asi pachine zvinhu zvakakwana zvekukwiza, uko kwaanopokana naJonathan Riddell.
Iwe unogona kuwana uyu mufananidzo weiyo system nekuenda kune inotevera chinongedzo.
Sezvauri kuona, pane akati wandei mavhezheni aunogona kuona achiteerana, iwe unongofanirwa kurodha yazvino vhezheni yakagadzirwa, iyo parizvino yaive iyo kubva Nyamavhuvhu 21 yegore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » KDE Neon Pinebook remix Edition ikozvino inotsigira 64-bit ARM malaptop
ndiri kuda kungoziva akadaro
Ndeapi mashoko kubva kunhau aya?
Pindura kune kungoda kuziva